Chihuri named in vehicle service scandal - NewsDay Zimbabwe
This came out yesterday when Chihuri’s former subordinate, Senior Assistant Commissioner Robert Tendero Masukusa, appeared in court charged with sending his personal vehicle to Zimoco for service under the ZRP account.
Magistrate Rumbidzai Mugwagwa heard that Masukusa, who is represented by Tapson Dzvetero, would take his and other top police officers’ vehicles for service
“On several occasions, the accused used the ZRP 404F registration number to fix his vehicle and several other private vehicles which belonged to Chihuri.
Zimoco acted upon thinking it was the police vehicles,” Mabwe said.
“I tracked the vehicle with the registration number ZRP404F and I found out that the vehicle belonged to CID Harare and was parked at Chitungwiza police workshop since 2014.”
Previous article Buyanga case takes new twist
Next article Trio jailed over fake US$ notes
ONE cannot help, but be amused by the current state of affairs in Zimbabwe. Related posts: Lungu dismisses impeachment moveOut & about ...